Cool ရည်မှန်းချက်! | Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » အားကစားဆိုင်ရာ » Cool ရည်မှန်းချက်!
Cool ရည်မှန်းချက်! APK
လူတိုင်းအတွက်ဘောလုံး! Cool Goal တွင်အကောင်းဆုံးကန်ဘောများကိုပြသပါ၊ မင်းရဲ့တာဝန်လား။ ရိုက်ကူး! မရေမတွက်နိုင်သောရန်သူကစားသမားများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ၊ သင်၏ဘောလုံးကိုဘောလုံးစူပါစတားကဲ့သို့ကွေးကောက်ကာပြီးပြည့်စုံသောဂိုးကိုရိုက်ပါ။ ယခု Cool Goal တွင်အဆုံးမဲ့နီးကပ်သောအခမဲ့ကစားနည်းများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။
ကစားရန်အတွက်သင်၏ဘောလုံးသပိတ်၏ထောင့်ကိုသတ်မှတ်ပြီးမည်သည့်အတားအဆီးကိုမဆိုဆန့်ကျင်သောကစားသမားများမထိမိစေရန်သင်၏အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ အသံရိုးရှင်းလား ထပ်စဥ်းစား! ရန်သူကစားသမားများသည်အရူးအမူးအမျိုးမျိုးကိုဆွဲထုတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကပင်နယ်တီအပြန်အလှန်ပစ်မှတ်တစ်ခုချင်းစီမှထွက်ပေါ်လာရန်အတွက်လျှပ်စီးမြန်သောတုံ့ပြန်မှုများ၊ ယုတ္တိဗေဒစွမ်းရည်များနှင့်လေးနက်သောဘောလုံးကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်လိမ့်မည်။
သင်ပြီးပြည့်စုံသောဘောလုံးကန်ခြင်းနှင့်ဂိုးသမား၏ဂိုးကိုလှည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဘောလုံးကိုလွယ်ကူစွာထိမှန်နိုင်သည်။ ဘယ်တော့မှဘောလုံးကိုဘယ်တော့မှကစားချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့်ဖိအားအောက်တွင်မဆိုဂိုးများကိုသင်နိုင်ပြီးမီးလုံးတစ်လုံးအားဖြင့်ပင်ပစ်နိုင်သော်လည်းမည်သည့်အရာကမှမတားဆီးနိုင်ပါ။ သင်ကတိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်ပါ။ ဘောလုံးကန်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် Cool Goal ဂိမ်းများတွင်နာမည်များကိုယူသည့်အခါမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှသင့်လမ်းကိုအဘယ်သူမျှမသွားနိုင်ပါ။
သင်၏ဘောလုံးဘောလုံးအတွက်အရေခွံအသစ်များကိုယူပါ၊ ကြယ်များကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ပါ၊ သို့မှသာသင်သည်နောက်ဆုံးဘောလုံးသပိတ်မှောက်ခြင်းကိုခံရသောအခါ၊ သော့သုံးခုကိုသင်သော့ဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ဘောလုံးကစားနည်းများအတွက်ဆုများသိမ်းဆည်းထားသောကဒ်များကိုဖွင့်ရန်၎င်းတို့ကိုသုံးနိုင်သည်။ Cool Goal ထဲကိုသင်များများထည့်လိုက်လေ၊ ဒီသဲကန္တာရထဲမှဘောလုံးကိုဂိမ်းထဲမှသင်များများရနိုင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သဲသောင်ပြင်များမှသဲသောင်ပြင်များအထိသဲသောင်ပြင်များကိုကန်လိုက်သကဲ့သို့ကမ္ဘာအနှံ့သို့ပို့ပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဘောလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘောလုံးသပိတ်မှောက်လျှင်၊ ဤအရာသည်သင့်ကိုသာမာန်ဘောလုံးထက်ပိုသောကြောင့်သင့်အားလှပသောဂိမ်းသို့ပြန်ခေါ်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပျမ်းမျှအားကစားဂိမ်းထက်ပိုသည်၊ Cool Goal ဖြစ်သည်! ဘောလုံးကစားခြင်းနှင့်ရံဖန်ရံခါအခမဲ့ကန်သွင်းခြင်းအမျိုးမျိုးသောထောင်နှင့်ချီသောအဆင့်များရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကိုရင်ဆိုင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ။
ဒါကြောင့်သင်ကဘောလုံးကန်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးဘောလုံးများပစ်ခြင်းအတွက်သင်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။ သင်၏ဘောလုံးကန်ချက်ကိုတင်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ Cool Goal time ဖြစ်သည်။ သင်တစ်သက်တာ၏ပင်နယ်တီကန်ကိုဆင်းသက်ရန်အတားအဆီးများကိုရှောင်တိမ်းနေစဉ်သင်၏ ဦး နှောက်နှင့်သင်၏ဖိနပ်ကိုသုံးပါ။
ပျင်းစရာကောင်းသောဘောလုံးဂိမ်းများကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအခမဲ့ဘောလုံးကစားနည်းတစ်ခုလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါ။ ဘယ်တော့မှမခံစားဖူးသည့်အားကစား၏ပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားကြည့်ပါ၊ Cool Goal သည်သင်၏အိပ်မက်များ၏ဘောလုံးပစ်ခတ်မှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Cool Goal ကိုအမြဲအာမခံပါသည်။ နည်းနည်းအေးမြရှိနေမည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းကသင့်အားအအေးဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုနှင့်အမှားများကိုပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တို့မင်းကိုချစ်ပါတယ်။
53.63 ကို MB